Aqoon kororsi ku saabsan yaraynta tacadiyada Dameerka loo gaysto oo Hargaysa lagu qabtay | Radio Iftin
Aqoon kororsi ku saabsan yaraynta tacadiyada Dameerka loo gaysto oo Hargaysa lagu qabtay
(Saturday, March 28, 2015)- Agaasimaha Ururka U dooda Xuquuqda Dameeraha Dr Cali Xasan Xirsi ayaa Maanta kulan ku saabsan Sidii loo ilaalin lahaa Tacadiyada Lagu hayo Dameeraha Ku qabtay Magaalada Hargaysa.
Aqoon kororsigan oo socon doono mudo laba cisho ah ayaa waxa loo qabtay mulkiilayaasha dameeraha iyaga oo lagu guubaabiyay in ay ilaaliyaan dameeraha.
Kulan kan ayaa waxa ka soo qayb galay agaasimaha wasaaradaha Cadaalada,Agaasimaha Xanaanada Xoolaha, Xildhibaano iyo Marti Sharaf Badan.
Agaasimaha Ururka U dooda Xuquuqda Dameeraha ayaa ka waramay Tacadiyada Lagu hayo Dameeraha iyo Sida looga Saari karo waxaana uu yidhi.
“Aqoon korodhsigan waxaanu u qabanay Dadka dameeraha ku shaqaystay,kaas oo faa’ido badan iyo intifaac badan Runtii u leh dadka,isla markaana aan la daryeelin,ujeedooyinka ugu muhiimsan ee aanu u qabanay kulankani waxa weeyaan in laga hadlo tacadiga baahsan ee lagu hayo dameeraha iyo in kor loo qaado aqoonta dadka dameeraha iska leh si ay fursad ugu helaan in ay daryeelaan Dameerahood,waxaana loo baahan yahay in lasameeyo xeer ah Sharci Ay dawlada hoos ee Hargaysi soo saarto”.
Xildhibaan Cabdilaahi oo ka tirsan Golaha deegaanka ee caasimada Hargaysa waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in tacadiga lagu hayo dameeraha Laga daayo,isaga soo jeediyay inaan la saarin Wax ka badan Inta ay qaadi karaan waxaana uu yiri.
“Hortu Xayawaan oo dhami kal gacal ayuu u baahan yahay oo hab loo dhaqo ayuu u baabahan yahay,Dameerahuna waa kuwa ugu dhaw ee magaalada inala jooga,qofka dameerka iska lehna laba shay ayaa looga baahan yahay,Dameerku si uu uga soo baxo hawshiisa waa laga maarmaan in la daryeelo marka uu xanuunsado si hadhwo loogu Guto Shaqadiisa,waxa loo baahan yahay in marka ay cididu ku baxdana laga jaro.
Intaas waxa uu ku daray isaga oo hadalkiisa siiwata xildhibaanku kana sii hadlaya tacadiga ku dhaca Dameeraha.”qof kasta waxa looga baahan yahay in Sida uu isagu isku ilaaliyo u ilaaliyo isna xayawaanka ay ku ganacsadaan,kolay aniga xildhibaan ahaan markasta markaan arko dameer gaboobay oo suuqa lagu siidaayay oo cuntadiina laga jaray aad Ayaan uga naxaa,waxaanan leeyahay qofkasta uu Dameeraha Wata, waxaan farayaa inuu ilaaliyo Xuquuqda ay leeyihiin,Una adeego siiyana waxa ay mudan yihiin.
Dr Axmed Caydiid Odawaa oo isaguna Madasha hadalo kooban ka soo jeediyay ayaa ku dheeraaday Faa’idada uu dameerku leeyahay iyo sida uu ugu baahan yahay in La ilaaliyo si uu u tamariyo Dameerku waxaana uu yidhi.
“Dameerku Sida bil Aadanka ayuu u dam-qanayaa,Intaas wax ka daran neefkaas ilaahay abuuray inaad dhan-gad ugu darto,waxaad arkaysaa dameer lagu shaqaystay oo garba beelay oo cidiyahu ku baxeen qaarna Lugahu qalooc sameen,waxaana loo baahan yahay in la ilaaliyo,tacadiga iyo hagar daamadana laga daayo,intaas aan suuqa marayay wali maan arag cid leh isaga oo alaab culus la saaray oo waliba loogu daray Ul cid leh ka daaya,markaas kulan kan waxa loo baahan yahay in laga soo saaro adeegyo bidho dhal ah,madaama oo idinkuna tihiin dadkii dameeraha lahaa inaad siisaan xaqiisa ayaa loo baahn yahay.
Dhinaca kale waxa isna halkaas ka hadlay cabdi qaadir oo ka socday Shirkada Xawilaada lacagaha ee dahabshiil waxaana uu ka shekeeyay sidaan loo ilaalin dameeraha iyo tacadiyada ku dhaca isaga oo u mahad naqay ururka isku hawlay sidii loo yarayn lahaa Arimahaas oo dhan,waxaana uu soo jeediyay in Ay golaha sharci dajintu xeer ka soo saarnaa lagu ilaalinayo dameeraha.
Caaqil Maxamed Xirsi iyo Garaad Mahad waxaana ay si isku Mid Ah uga wada hadleen In lajoojiyo Tacadiga ku dhaca dameeraha,waxaana ay cadeyeen in loo baahan yahay in Sharci adag oo lagu dhaqo dameeraha loo baahan yahay in lasameeyo.
Agaasimaha Guud ee wasaarada Cadaalada Khadar Axmed Diiriye Ayaa isaguna sheegay in Ay kula Xisaabtami Doonaan Mulkiilayaasha Dameeraha Haday Tacadi kula Kacaan,loona Baahan yahay in Ay Xuquuqdooda Siiyaan.
Gaba-gabadii waxa kulankan Aqoon Korodhsigan ku saabsan Sidii loo ilaalin lahaa xuquuqda dameeraha Soo Afmeeray Agaasimaha wasaarada Xanaanada Xoolaha Somaliland waxaana uu Cadeeyay in Ay qasab ku tahay in Ay ilaaliyaan Siday Xuquuqdooda u ilaaliyaan Kan dameerahuna,isaga oo soo jeediyayna in Waaji tahay Marka ay ku shaqeeyaan Dameeraha in Ay iyagana Siiyaan Xaqooda.
Halku Dhigna waxa ay uga Dhigeen Dadkan Xuquuqda”Intaan Duunyadda Ku soo saarayay,Daryeelbaan kugu haystay,Markay Da’i ii Run sheegtay Daaqaddaad iga tuurtay,Qof kasta oo leh Dameer Am mayeedhaan Aan ka dam-qanayn waxa la saaray in Laga daayo tacadiga loona tudho.